I-Vulkkano Bullet, isithethi esiphathwayo esinoyilo ngononophelo kunye nesandi esikumgangatho ophezulu | Iindaba zeGajethi
I-Vulkkano Bullet, isithethi esiphathwayo esinoyilo ngononophelo kunye nesandi esikumgangatho ophezulu
IiVillamandos | | Izithethi, Reviews
Izipikha eziphathwayo zizizixhobo esiphantse ukuba sonke sinazo kwaye sisebenzisa zona rhoqo nangakumbi. Kukho amakhulu ezixhobo zolu hlobo kwimarike, ngobukhulu obahlukeneyo kunye namaxabiso kubo bonke okanye phantse bonke abasebenzisi. Kwiintsuku zakutshanje sikwazile ukuvavanya enye yezi zixhobo, ngakumbi Imbumbulu yeVulkkanoEzabelwe thina olu hlalutyo ukusukela souk, esimbulela esidlangalaleni.
Kule Vulkkano Bullet ime ubukhulu bayo uyilo olunika ukunganyamezeli okukhulu kukothuka, kukwaxhathisa ukutshiza ngenxa yesitifiketi se-IPX6. Oku kusivumela ukuba siyisebenzise phantse kuyo nayiphi na imeko, nokuba ayimnandanga okanye njengokuba ibiyimeko yam, ukumamela umculo ngelixa ndihlamba.
1 Iimpawu kunye neenkcukacha
3 Uvavanyo lokusebenza
Iimpawu kunye neenkcukacha
Okokuqala, siza kuphononongwa Iimpawu eziphambili kunye nokubalulwa kwale Bullet yeVulkkano ukucaca malunga nokuba loluphi uhlobo lwesixhobo esithetha ngaso;
Imilinganiselo: 149.5 x 47 x 68.6 mm
Ubunzima: 330 gram
Uyilo olunama-2 x 40mm abaqhubi (10W)
Ukunxibelelana: i-bluetooh 4.0, i-microUSB, i-3.5 mm iqhagamshela leJack kunye nomfundi wekhadi le-SD
Ibhetri: i-lithium ene-2.200 mAh kunye nokuzimela okuthe ngqo kweeyure ezili-10
Abanye: Imakrofoni engenazandla ezidityanisiweyo kunye nokuqinisekiswa kwe-IPX6 kuyenza ichaphazele ukumelana
Nje ukuba iVulkkano Bullet ikhutshwe ngaphandle kwebhokisi sayifumana icwecwe, isixhobo esomeleleyo ekubonakaleni kokuqala kubonakala ngathi siyamelana nakuphi na ukubetha, ukuwa okanye ifuthe. Ngokugqitywa okumnyama nobomvu, singatsho ukuba ayisiyiyo intle esiyibonileyo, kodwa xa sijonga ukuba sisithethi, banoyilo olungaphezulu komdla kuye nawuphi na umsebenzisi.
Ubunzima bayo buyiigram ezingama-330 kuphela, into eyothusayo, kuba inikwe ukomelela kwayo unokucinga ukuba ubunzima besixhobo buya kuba bukhulu ngakumbi. Ngokubhekisele kubukhulu, azibaxwanga konke konke; 149.5 x 47 x 68.6 iimilimitha. Ukuba uza kuyisa naphi na apho ukhululekile ukuba uhambise kwaye enkosi kuyilo lwayo oluxande iya kuba ilungile phantse naphina apho uya kuyibeka khona.
Ngaphambili kweVulkkano Bullet sifumana isibini sama-400 mm abaqhubi abanika amandla we-10W kwaye, njengoko siza kubona kamva, isinika ngaphezulu komgangatho wesandi ochanekileyo ngesixhobo solu hlobo. Icandelo eliphezulu yindawo ekhethelwe indawo yamaqhosha omzimba ama-5 esinokuthi siwasebenzise ukwenza imo yokuvumelanisa kwebluetooh, utshintshe umthombo weaudiyo, lawula ivolumu kwaye udlale okanye ume kancinci ukudlala. Njengezincedisi sifumana i-LED ebonisa imakrofoni esinokuthi senze kuyo kwaye samkele iifowuni.
Kwicala lasekunene sifumana umlobothi onyukayo ukuxhoma isixhobo phantse naphina apho siyifuna khona kunye nesiciko serabha esishiya sifihle isinxibelelanisi se-microUSB esiya kuthi sivumele ukuba sibize ibhetri yangaphakathi, isinxibelelanisi seJack esingu-3.5 mm kunye neR.i-anura yokufaka amakhadi e-MicroSD apho sinokufikelela khona kumculo wethu owuthandayo. Ikhadi le-MicroSD alithandabuzeki ukuba yenye yezona zinto zimangalisayo kwaye zinomdla ngakumbi kuba ikuvumela ukuba ugcine phantse naluphi na uhlobo lwesandi kuyo, kwaye uyidlale ngalo naliphi na ixesha nakwindawo.
Idityaniswe iVulkkano Bullet kwiWolder Wiam 65, into esinokuyenza ngokukhawuleza okukhulu, ngoku sikulungele ukuqala ukusebenzisa isithethi esiphathwayo. Umgangatho wesandi, njengoko uza kukwazi ukubona kwividiyo esikubonisa apha ngezantsi, iyonwabisa ngokwenene. Kuyamangalisa ukuba nakwivolumu ephezulu isandi silungelelene kwaye ngaphandle kokugqwetha kakhulu, njengoko kusenzeka kwezinye izixhobo zolu hlobo.
Enye yezona zinto zinomdla malunga nesi sixhobo, kwaye esingakhange siyikhankanye okwangoku, kukwazi ukumamela unomathotholo we-FM. I-eriyali yayo ayinamandla kakhulu, kodwa ngokuqinisekileyo iyasebenza ukumamela inani elikhulu lezitishi. Kwimeko yam indikhuphile ngaphandle kwengxaki enye ukusukela kwiintsuku ezimbalwa bendingenayo i-CD yemoto yam, ngoko ke iVulkkano Bullet yayiyeyona ndawo ndandihamba nayo ukumamela unomathotholo nokumamela umculo endiwuthandayo.
Okokugqibela, kufuneka sithethe malunga nokuzimela kwesixhobo, ekubonakalisweni kokubekwa okusetiweyo kwiiyure ezili-10, nangona kwimeko yethu singakwazanga ukugqitha iiyure ezili-9. Ewe kunjalo, siyazi ukuba ukuzimela kuya kuxhomekeka kakhulu kumthamo esidlala kuwo umculo okanye unomathotholo we-FM.
Nditsho ukuba ndinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndikwazi ukuvavanya inqwaba yezithethi eziphathwayo, ezinye zibalasele kwaye ezinye ndingakhange ndizicingele ukuba zinokuba nendawo kule bhlogi ngendlela yenqaku. Le Bullet yeVulkkano ngokungathandabuzekiyo yenye yezona zinto zilungileyo ndizamileNangona mhlawumbi ukuphelelwa ngonomathotholo emotweni kuye kwaba nefuthe elikhulu, okundivumele ukuba ndithandane kwaye ndicofe esi sixhobo ukudinwa.
Ngexabiso le 49.90 euro Ndingatsho ukuba isinika uyilo ngononophelo, ngomgangatho olungileyo wesandi kunye namathuba amahle ngokunxibelelana. Enye yezona zinto zibalulekileyo ngaphandle kwamathandabuzo kukumamela umculo kwikhadi le-MicroSD.
Ngaphambi kokugqiba, andifuni ukuyeka ukubonisa ukuba kunomdla kangakanani ukuba esi sithethi sinesiqinisekiso se-IPX68, esisenza ukuba simelane nokutshiza kwaye sikuvumela, umzekelo, ukusisa kwishower okanye ibhafu ngaphandle koloyiko lokufumana kumanzi, konakala nayo ngonaphakade.
Uphengululo lwe: IiVillamandos
Icwecwe kwaye yomelele uyilo
Umfundi wekhadi le-MicroSD
Mnyama kuphela uyilo
Ucinga ntoni ngale Vulkkano Bullet?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Vulkkano Bullet, isithethi esiphathwayo esinoyilo ngononophelo kunye nesandi esikumgangatho ophezulu
Ayisiyonto intle, kodwa ukuba inesandi esifanelekileyo kwaye ngakumbi inqanaba le-IP kunokuba yinto enomdla kwelo xabiso. Endingakuboniyo kucacile yiMicrosoftSD, kuba ngaphandle kwescreen sokukhetha umxholo, inokuba sisihogo ukuya kubo nganye nganye. Kulungile xa usibaleka, kodwa ukuba nomculo ongasemva kwaye kufuneka uqhubeke ucofa okwexeshana de ufumane icwecwe alindiqinisekisi.
Inye kuphela into endingayiqondiyo: uthi isithethi siyonwabisa, enye yezona zinto zilungileyo owakha wazama kwaye ixabiso lelinye lezona zinto zinomdla kodwa emva koko ubeke ixabiso njengexabiso.
I-Apple ivala indawo yokuSebenza yokuTshixa. Kunzima ukubona ukuba i-iPhone ibiwe
UMasaya Nakamura, umseki weNamco kwaye ophetheyo ukumilisela iPac-Man usweleke